यी चार राशी भएका युवतीमा हुन्छ पुरुषलाई आकर्षण शक्ति…… – Online Nepal
May 6, 2020 502
ज्योतिषलाई विश्वास गर्ने हो भने केही राशी भएका युवतीहरु आफ्नो सुन्दरता बिना नै कसैलाई रिझाउन सक्षम हुन्छन् । १२ राशीमध्ये चार राशी भएका युवतीहरुमा मात्र यस्तो प्रभाव हुन्छ जसले जुनसुकै पुरुषलाई उनीहरुतर्फ आकर्षित गर्न सक्छन् । मिथुन राशी भएका युवतीहरुको तुलना अप्सरासँग गरिन्छ । जसले जोसुकैलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । सुन्दरताबाहेक यी राशी भएका युवतीमा यस्ता थुप्रै गुण हुन्छ जसले पुरुषलाई आकर्षित गर्छन् । उनीहसँग धेरै उमेरसम्म जवान देखिने क्षमता पनि हुन्छ ।वृष राशी भएका युवतीहरुको गन्ती सुन्दर देवीसँग हुन्छ । उनीहरुसँग अरु व्यक्तिमाथि आफ्नो अधिकार जमाउने गुण हुन्छ । साथै उनीहरुको कुरा पुरुषहरु निकै सजिलै मान्ने र पूरा गर्ने गर्दछन् ।
वृश्चिक राशी भएका युवतीहरुसँग कसैलाई पनि आकर्षित गर्ने शक्ति हुन्छ । उनीहरुको अनुहार र आँखामा एक प्रकारको सम्मोहन हुन्छ त्यसकारण जसले पनि उनीहरुलाई हेर्छन् उनीहरु मोहित हुन्छन् । मीन राशी भएका युवतीहरु रोमान्टिक हुन्छन् । पुरुषहरु उनीहरुको प्रेममा निकै सजिलै पर्ने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो मिठो कुराले चाँडै नै पुरुषलाई आकर्षित गरिहाल्छन् ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः एकसाथ जन्मिएका व्यक्तिहरु किन उस्तै हुँदैनन् ? कुनैपनि व्यक्तिको जीवन निर्धारणमा केवल उसको जन्म-समय मात्र होइन, बरु गर्भाधान समय र प्रारब्ध (पूर्व संचित कर्म)को भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ ।यसप्रकार ज्योतिष तीन आयममा आधारित छ । यो तीन आयम हो, प्रारब्ध, गर्भाधान समय र जन्म समय । यसलाई तीन महत्वपूर्ण आयममा अर्थात जन्म-समय, गर्भाधान-समय र प्रारब्धको अखण्ड प्रभावले मान्छेको सम्पूर्ण जीवन सञ्चालित हुन्छ । कुनै व्यक्तिको जन्म-प्रमाणपत्रको निर्माणमा जुन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हो, त्यो हो समय । जन्म-समयलाई लिएर पनि ज्योतिषाचार्यमा मतभेद छ । केही विद्वान शिशु रोएको अवस्थालाई जन्मको सही समय मान्छन्, कतिले भने नाल-विच्छेदनलाई सही मान्छन् ।
खैर, यहाँ हाम्रो मुद्दा जन्म समय होइन । कुनैपनि व्यक्तिको जन्म-प्रमाणपत्रका लागि उसको जन्मको सही ज्ञात हुन अति आवश्यक छ । अब जन्म-समय त ज्ञात हुन्छ, तर गर्भाधानको समय ज्ञात हुन सक्दैन । यसैले हाम्रो शास्त्रमा ‘गर्भाधान संस्कार’ द्वारा धेरै सीमासम्म त्यस समयको ज्ञात गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।अहिले वैज्ञानिक अनुसन्धानबाटै प्रष्ट भइसकेको छ कि आमाबुवाको पूर्ण प्रभाव बच्चामा पर्छ । खासगरी आमामा । किनभने बच्चाले आमाको पेटमा ९ महिनासम्म आश्रय लिन्छन् । अहिले सोनोग्राफी र डीएनए जस्तो प्रविधिबाट यस कुराको प्रमाणित हुन्छ । अतः जुन समय एक दम्पतीले गर्भाधान गरिरहेका हुन्छन्, त्यस समय ब्रम्हान्डमा नक्षत्रको व्यवस्था र ग्रह स्थितीले हुनेवाला बच्चामा पूर्ण प्रभाव पार्छ । यस महत्वपूर्ण तथ्यलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो शास्त्रमा गर्भाधानको मुहूर्तको व्यवस्था छ ।
गर्भाधानको दिन, समय, तिथि, वार, नक्षत्र, चन्द्र-स्थिती, दम्पतीको कुण्डलीको ग्रह-गोचर आदि सबै कुराको गहन परीक्षबाट गर्भाधानको मुहूर्त निकालिन्छ । अब यदि कुनै जन्मने वाला व्यक्तिको जन्म यस समान त्रि-आयामी व्यवस्थामा हुन्छ (जो असंभव छ), तब ति सबैको जीवन दुरुस्त एकै हुन्छ । यसमा कनिपति सन्देह छैन ।ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने हामी यस तीन आयाममा केवल एक आयाम अर्थात जन्म-समय ज्ञात हुन्छ, तर तेस्रो आयाम अर्थात प्रारब्ध न हामीलाई ज्ञात हुन्छ न त सामान्यतः त्यसलाई थाहा पाउन नै सकिन्छ । यसैले यस विश्वमा एकै समयमा जन्म लिने व्यक्तिहरुको जीवन पनि आपसमा भिन्न भिन्नै हुन्छ ।ज्योतिष मान्छेको भविष्यको ज्ञात हुने पद्धतीको नाम हो । यो पद्धती भिन्न हुनसक्छ । एवं यो देश, काल र परिस्थिती अनुसार समय-समयमा अपडेट गर्नुपर्ने आवश्यक पनि हुन्छ । एक सिद्धयोगीले पनि कुनै व्यक्तिको विषयमा त्यती सटिक भविष्यवाणी गर्न सक्छ, जति कि एक जन्मकुण्डली हेर्ने ज्योतिषी वा हस्तरेखा विशेषज्ञले गर्न सक्छ ।
Prevनेपालगन्जमा यसरी भयो प्रहरी माथि आ’क्रम’ण (भिडियो हेर्नुस्)
NextBreaking: थप १७ जनामा कोरोना पोजेटिभ , संक्रमितको संख्या ९९ पुग्यो
बंगलादेशबाट नेपाली विद्यार्थीको बिन्ती : सरकार ! हवाईजहाज पठाइदेऊ, भाडा आफैँ तिर्छौं
यी हुन् साइकल चडेर गाडी किन्ने ६० लाख बजेटबाट प्राविधिक कलेज खोल्ने मेयर !
यी राशिका व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा राम्रो साथी, गर्छन हद पार गरेर सहयोग
मि’लापत्र गरे भोलिपल्टै मिना फेरि टा’प, चौकीमा अ’र्को सहमति प’छी य’स्तो… (भिडियो हेर्नुस्)
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (62175)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (51113)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (45391)
काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्नेहरुको लागी आयो यस्तो खबर ! (44816)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43363)
वैशाख ३ गतेपछि यस्तो छ आवतजावतको तयारी , ३ गते सम्म धैर्य गरौ (41299)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (38018)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (36219)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (29184)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27876)
बधाई छ् दिदी ।। हार्दिक शुभकामना .. पानीपुरी चटपटे बेचेरे ५ बर्षमै काठमाण्डौमा घर बनाएकी सुन्तली दिदीको अनौठो संघर्ष (भिडियो)
बैदेशिक रोजगारीको पी’डा ! घर बनाएर विवाह गर्ने स’पना देखेर मलेसिया गएका मोरङका रामकुमारको बा’कसमा श’व
५६ यात्रु बोकेको बस दुर्घटना, १९ जनाको मृत्यु
चितवनबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बोलेरोले मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिँदा पानी पानी भन्दै घट’नास्थ’लमै ज्या’न गुमा’ए पुजनले
हार्दिक बधाई : मधेसी महिला बाट पहिलाे पटक इन्सपेक्टरमा नाम निकाल्न सफल प्रतिभा लाई !